Cameroon / Diaspora: Pakati pekurwisana naPatrice Nganang, Richard Bona anowana rubatsiro kubva kuna Boris Bertolt - TELES RELAY
HOME » kambani »Cameroon / Diaspora: Pakati pekurwisana naPatrice Nganang, Richard Bona anogamuchira rubatsiro kubva kuna Boris Bertolt
Cameroon / Diaspora: Pakati pekurwisana naPatrice Nganang, Richard Bona anotsigirwa naBoris Bertolt
Mutori wenhau uye mhere-mhere vanoramba izvo zvaanodana kuti "utsinye, husina kukodzera uye husina kunaka" kurwisa muimbi.
Boris Bertolt anomhanya kununura Richard Bona. The muimbi zvizere cyber kurwisana ne munyori Patrice Nganang mazuva achangopfuura aona wenhau uye whistleblower kumutumira mashoko anotsigira musi May 16 2019.
Achipindura kumunhu tsamba vari niggle nzira vachinyunyuta guitarist kwete mari zvakakwana mukurwisa vari simba munyika ravakaberekerwa, Boris Bertolt akanyora: "Ndiwe ani kuti utiudze zvatinofanira kuita kuti tive muvengi weByya? Tiudzei mubvumirano waifanira kunge uri wechokwadi vanopesana neByya activists? Isuwo isu tiri kuenda kundoita mutambo uyu uye tichabudirira. Havasi vose vanogona kuita basa rakafanana mune revolution. Iko kuchinja kwakafanana nekuvaka imba. Kune vakagadziri, vavezi, masoni uye plumbers. Tinofanira kuremekedza basa revanhu vose uye kwete kugara tichidururira mukuzvirova. "
Boris Bertolt anoona kungoerekana kuratidzwa kwemanzwiro anonyanyisa uye matambudziko atisingagoni kuvabvumira "Kutora nhapwa hondo yekuchinja muCameroon". Uyu mudzidzi wechiremba muzvidzidzo zvezvemhosva anotaura kuti kune kuwirirana pakati pepro-Biya vanopisa simba uye vanopesana neByya vanopedzisira vangave vakafanana kuti vave vakakwirira kune vamwe. Kuva nhume dzaMwari.
Maererano naye, ndiko kunzwa uku kwepamusoro peboka rimwe pamusoro pezvimwe zvakange zvichitangira kuurayiwa kwakaipisisa munyika. "Apo pro-Biya vanopedzisira vasiri kuvanza kudana kuurayiwa kweAnglophones uye vamwe Bamileke. Vamwe vanopesana neByya vanopedzisira vatsigirawo pachena ruvengo rweBulu neBeti. Hazvigamuchirwi kana kushivirira ", anoramba.
Izvi zvose zvakanyorerwa tsamba yaBris Bertolt kuna Richard Bona
LETI KUNE MWARI WANGU WOKUTANGA RICHARD BONA
Dear Richard, dzangu rakapotsa nokuzvidira mudyandigere mashoma mazuva kunyatsonzwisisa magetsi rinomutsa uye gadzirira mobilizations ichisvika, I akaudzwa nezuro sebenzi kurwiswa, kukodzera uye kunaka kuti imi nawo chikamu chemunhu wandakachangobva kutsanangura se psychopath ane hutano hunhu hunhu huve narcissism uye hutano hwehutano.
Ndinoshuva pano kuti ndidzokerezve tsitsi dzedu nekudada iwe unofuridzira kune vakawanda vechiduku vaMamerica vakaita saiye. Kubva pane zvisiri izvo, asi ndiani akakwanisa kukwira kumusoro kwepasi rwenyanzvi yemimhanzi nesimba rebasa, kusarudza, kuzvivimba, chido chekubudirira. Vangani vari pasi pano vanozobatsirwa nekusimbiswa kwevanamano Quincy Jones? Zvishoma. Kwete kwete isu hatigoni kurega kunhuwa yakaiswa makore 36 runobva nokutongwa Mr. Biya, mumwe ane vanozivikanwa kuuraya vose njere elites, zvetsika nemagariro nezvematongerwe upenyu munyika ino, kutsakatisa kuedza zvose pasi pekuvakwa kwevanhu vari nani, vakarurama uye vanoenzanisa. Nenzira, Quincy Jones anoti iwe unofanira kunge uri "mumwe wevanhu vane tarenda zvikuru panyika". Ndiani anoziva Quincy Jones ichi kunongoreva kuti mabhiriyoni 6 vanhu munyika, mimhanzi, uri chikamu zvinoumba Mutsvene Grail.
Kune vose vasingazivi, Richard Bona ari chikamu naJean Pierre Bekolo matanho emutsika anotsigira pachena Mutungamiri-akasarudzwa Maurice Kamto. Vakaona mumurume uyu, murume ane chivimbo. A rallyer. Murume anokudzwa. Murume akashinga, wekuda nyika uye wenyika. Ndiani akagara achikoka vaMamerandan kuti vadane uye kwete kuvengana. Aiwa, Aiwa, hatifaniri kutendera vanhu vari kudiwa kwekugutsikana kwevanhu uye kugutsikana kunoparadza basa rekubatana, kuziva, kusunungurwa kwekambani yeCameronian ikozvino.
Dzimwe nguva tine zvishoma zviyeuchidzo. Mwedzi mishomanana yakapfuura, Richard Bona akanyadziswa nehurumende yaPaul Biya yevatengesi vezvinodhaka. Vakamuti iye anopesana nevanhu. Nhasi haakwanisi kudzokera kuCameroon nyika yekwavo. Ndiani anokupa kodzero yekusarudza uyo anoda Cameroon uye ndiani asingadi? Vatsigiri vaPaul Biya vakaumba chirongwa chekuda nyika. Ivo makasika paida kutsakatiswa rudzi dzinotaura Chirungu nzvimbo akasvetukira Cameroon kupinda rimwe yakaipisisa zvokuyamura nematambudziko munyika. Today Cameroon musi 1 6 vaida kubatsirwa ruyamuro. Tsanangudzo uchiratidza kuzvipira kunyika kubudikidza vatsigiri Apocalypse riri shoma kupa zvokudya vamwe rutsigiro dzedzinza kuti hurumende kuti anoba, vakasunga vavengi, chinouraya vanevana vacheche, uyo shaves nemisha, uyo inocherechedza cyber , kutambudzwa uye kuita zvinyorwa zvinoparadza.
Nhasi zvinopikisana zvose hurukuro nezvorudo uye rusununguko kuti President Maurice Kamto dzichikonzera muhondo iyi akasarudza kubayira vanhu vake sezvo vachibayira Jesu pachake kuti aponese vanhu, vamwe vavengi kune hurumende yaPaul Biya yakagadzira chibvumirano chekuita basa? Ndiwe ani kuti utiudze zvatinofanira kuita kuti tive muvengi we Biya? Tiudzei mubvumirano waifanira kunge uri wechokwadi vanopesana neByya activists? Isuwo isu tiri kuenda kundoita mutambo uyu uye tichabudirira. Havasi vose vanogona kuita basa rakafanana mune revolution. Iko kuchinja kwakafanana nekuvaka imba. Kune vakagadziri, vavezi, masoni uye plumbers. Tinofanira kuremekedza basa revanhu vose uye kwete kugara tichidururira mukuzvirova.
Aiwa, kwete, kwete Vanyengeri havagoni kubvumirwa kutora kurwisana kwekushandurwa kuCameroon. Iwe uchacherechedza kuti pane kutendeuka pakati pepro-Biya vanopesana nevanopesana neByya vanopedzisira. Vose vanonzwa vakanyanya kune vamwe. Kuva nhume dzaMwari. Hungu, manzwiro aya ekukwirira kweboka rimwe pamusoro pezvimwe izvo zvakange zviri pakutanga kwekuuraya kwakaipisisa munyika. Kunyange zvazvo pro-Biya vanopedzisira vasati vavanze kuuraya kuAnglophones uye kune vamwe Bamileke. Vamwe vanopesana nevanopikisa antibiya vanotsigira pachena ruvengo rweBulu neBeti. Hazvigamuchirwi kana kushivirira. Mune iyi macabre project, vanokunyora mavara (kunyora). Ndakakanganwa, vanondiidza ini zvino "Eloundou". Asi sezvo Mutungamiri akasarudzwa Maurice Kamto mutsamba yake yekupedzisira kune vanhu veMamerbia, akasimbisa: "Hazvirevi nekudzokorora nhema dzokuti inova chokwadi".
Tinofanira kudzivirira nzira, kusanganisira mumusasa wedu, kune avo vose vanoda kutitungamirira kuburikidza nehurumende yeByya. Avo vanorota kubereka nzira yekuregererwa, uori, nepotism uye kuparadzwa kwemashiripiti edu nemifananidzo. Maitiro anonyatsopesana nekumanikidzwa kwaMaurice Kamto uye nhengo dzebatanidzwa. Izvo zvishoma zvatingaita pamatunhu edu ndezvokusimbisa maitiro avanoita.
Pamusoro peRichard anodikamwa, ndinoda kukuudza kuti kwete chete kuvapo kwako muhondo yakakosha, asi tinokuremekedza iwe, tinokutsigira uye tinokuda.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actucameroun.com/2019/05/17/cameroun-diaspora-en-pleine-bagarre-avec-patrice-nganang-richard-bona-recoit-le-soutien-de-boris-bertolt/
[Chronicle] Hapana revolution pasina vakadzi! - YoungAfrica.com
Imbwa inoponesa mwana akavigwa ari kugara mumunda
Bvisa My Own Silence - New York Times